लाेकप्रिय समाचार - crosscheck.com.np
नाफामात्र होइन समाजसेवा पनि हो लघुवित्त भनेको भनेर बुझाउन जरुरी छ (अन्तर्वार्ता)
कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ– मीनबहादुर बोहरा । लामो समयदेखि लघुवित्तको क्षेत्रमा कार्य गरेर गरिब जनताको सेवामा समर्पित हुनुभएका बोहरा लघुवित्तले सेवा दिने भनेको नाफाका लागि मात्र होइन, समाज सेवाका लागि समेत हो भन्नुहुुन्छ । नेपालको...
यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्नु कति घातक ?
हरिप्रकाश चन्द ‘अग्निपुन्ज’/टंक कार्की
नेपालमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) निकै लामो समयदेखि चर्चाको शिखरमा छ । सरकार एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित गरिनुपर्ने पक्षमा रहँदा सत्तासिन दल नेकपाभित्रै यसबारेको बहस भुसको आगो जस्तै गरेर सल्किंदै गयो । पार्टीले केही समयअघि सम्पन्न गरेको केन्द्रीय कमिटीको...
व्याजदर नघटाइकन अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानी हुने सम्भावना एकदम कम छ (अन्तर्वार्ता)
० वर्तमान अर्थतन्त्रलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? अहिले केही सकारात्मक लक्षणहरू देखिएका छन् । जस्तो व्यालेन्स अफ ट्रेड केही सकारात्मक भइरहेको छ । व्यापारघाटा घटिराखेको छ । तर यो पनि पानीको फोकाजस्तो मात्रै हो । किनभने पाम आयल र भटमासको...
एनआरएनए महिला संयोजक यसपटक भोमा लिम्बूलाई
‘महिला नेतृत्व विकास र सशक्तिकरण, अवको हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ एनआरएनए ९ औं विश्व सम्मेलन तथा महाधिबेशनबाट एनआरएनए आईसीसीको २०१९–२१ कार्यकालका लागि महिला संयोजक पदमा उम्मेवारी दिएकी भोमा लिम्बू यस पटक बलियो बन्दै गएकी छिन् । हालसम्मको एनआरएनएमा...
सबैतिर बिगार्ने एउटा अदृश्य शक्ति छ
युवराज मैनाली साहित्यको क्षेत्रमा नयाँ नाम होइन । उहाँले लामो समयदेखि साहित्यका विविध विधामा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ । उहाँका करिब आधा दर्जन साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन् । उहाँ हालैमात्र भैरव प्रतिभा पुरस्कारबाट पुरस्कृत पनि हुनुभएको छ । साहित्यकारमात्र...